आज फिफा वर्ष खेलाडीको घोषणा हुँदै, मेस्सी, रोनाल्डो र भान डाइकमध्ये कसले मार्ला बाजी ?
मुख्य पृष्ठखेलकुद फुटबलआज फिफा वर्ष खेलाडीको घोषणा हुँदै, मेस्सी, रोनाल्डो र भान डाइकमध्ये कसले मार्ला बाजी ?
विराटनगर, ६ असोज । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले आज राति ‘फिफा वर्ष खेलाडी अवार्ड’को घोषणा गर्दैछ । आज राति हुने उक्त घोषणा इटालीको मिलानस्थित टिट्रो अल्ला स्कालामा हुनेछ ।
फिफाले पहिलो चरणमा छनोट भएका १० खेलाडीबाट अन्तिम तीन जनलाई छानेको छ । अन्तिम तीन सूचीमा बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सी, युभेन्टसका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लिभरपुलका स्टार भर्जि भान डाइक परेका छन् । यी तीनमध्येबाट पब्लिक भोटिङ र प्रदर्शन मुल्याङकनका आधारमा वर्ष खेलाडी छनोट गरिने छ ।
गत वर्षको वर्ष खेलाडीको अवार्ड क्रोयसियाका कप्तान लुका मोड्रिकले हात पारेका थिए । मोड्रिकले रोनाल्डो र मोहम्मद सालाहलाई पछि पार्दै उक्त अवार्ड जितेका थिए । तर, अर्जेन्टिनाका कप्तान मेस्सी भने अन्तिम तीनमा पनि अटेका थिएनन् । तर, यस वर्ष भने आफ्नो क्लबलाई उपाधि दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका मेस्सी, रोनाल्डो र भान डाइक यस अवार्डको दौडमा छन् ।
यस सिजन लिभरपुलका डिफेन्डर डाइकलाई मुख्य दाबेदारको रूपमा हेरिएको छ । यूईएफए च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेका उनले आफ्नो राष्ट्र नेदरल्याण्ड्सलाई यूईएफए नेशन्स कपको फाइनलसम्म पुरर्याएका थिए । यस्तै उनले यसअघि नै स्टार खेलाडीद्वय मेस्सी र रोनाल्डोलाई पछार्दै यूईएफए वर्ष खेलाडीको अवार्ड जितेका थिए ।
यस्तै दोस्रो दाबेदारका रूपमा पोर्चुगिज स्टार रोनाल्डोलाई हेरिएको छ । किनकी, अघिल्लो सिजन मात्र स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडबाट इटालियन क्लब युभेन्टस गएका उनले आफ्नो राष्ट्र पोर्चुगललाई यूईएफए नेशन्स लिगको उपाधि दिलाएका छन् । यस्तै ३४ वर्षीय रोनाल्डोले युभेन्टसलाई सिरी ‘ए’ र सुपरकोपा इटालियनाको उपाधि दिलाएका छन् ।
यसैगरी ला लिगाको उपाधि जितेको मेस्सी पनि यो अवार्डको दौडमा छन् । सन् २०१८–१९ मा व्यक्तिगत अवार्डहरूमा सबैलाई पछि पारेका मेस्सीले पनि यो अवार्ड जित्ने सम्भावना छ । मेस्सी अघिल्लो सिजनको च्याम्पियन्स लिगको सर्वाधिक गोलकर्ता पनि हुन् ।
‘फिफा वर्ष प्रशिक्षक’ र ‘फिफा वर्ष गोलकिपर’को घोषणा पनि आजै
फिफाले ‘फिफा वर्ष कोचको घोषणा पनि आजै गर्दैछ । यस अवार्डको दौडमा भने युरोपियन च्याम्पियन्स लिभरपुलका प्रशिक्षक जर्गेन क्लोप, प्रिमियर लिग विजेता क्लब म्यान्चेटर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वाडिओला र टोटनह्याम हटस्परका मौरिसियो पोचेटिनो रहेका छन् । यस्तै महिला प्रशिक्षकतर्फ जिल एलिस, ग्रे नेभिल्स र सरिना विगम्यान परेका छन् ।
यसैगरी आजै राति फिफाले ‘फिफा बेष्ट गोलकिपर’को घोषणा गर्नेछ । यस अवार्डको दौडमा बार्सिलोनाका गोलरक्षक मार्क एन्ड्र टेर–स्टेगेन, लिपरपुलका गोलरक्षक एलिसन बेकर र म्यान्चेस्टर सिटीका गोलरक्षक एडर्सन सान्टना डी मोराइस रहेका छन् ।
त्यस्तै वर्ष उत्कृष्ट गोल पुस्कास अवार्डका लागि मेस्सीसँगै जुवानफर क्वान्टेरो र ड्यानियल जेसोरी परेका छन् । वर्ष उत्कृष्ट महिला खेलाडी अवार्डमा एलेक्स मोर्गन, लुसी ब्रोन्ज र मेगान रापोनी मनोनयनमा परेका छन् ।